Apple လည်း ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ iPhone တွေထုတ်တော့မလား? | MyTech Myanmar
Apple လည်း ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ iPhone တွေထုတ်တော့မလား?
ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ ထုတ်မယ်လို့ ဟိုးအရင်ကတည်းကနေ စီစဉ်ကြွေးကြော်နေခဲ့တဲ့သူကတော့ Samsung ပါ။ အခုလည်း သိပ်မကြာတော့တဲံ အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Galaxy ဖုန်းတစ်လုံးကို လာမယ့် ၂၀၁၉ ပထမဆုံး ၃လအတွင်းမှာ မိတ်ဆက်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုကွေးခေါက်ဖုန်းတွေ ထွက်လာမယ့်အကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ Samsung Developer Conference မှာ ဖုန်း Prototype ကို ထုတ်တောင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ ကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ Display နည်းပညာက တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖုိ့လည်းကောင်းသလို အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားလာကြတဲ့ ၂၀၁၉ ရဲ့နည်းပညာဆိုလည်း မှားလောက်မယ်မထင်ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားမိတာက ကွေးခေါက်လိုက်ပြီး ပြန်ဖြန့်လိုက်ရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ပြောင်းသွားမလဲ? တကယ်ရော လိုအပ်တဲ့ Feature တစ်ခု ဟုတ်ရဲ့လား? အသုံးမလိုဘဲ ဆန်းသစ်ရုံဖန်တီးထားတာလား? အနာဂတ်မှာရော ဒီကွေးခေါက်နိုင်တဲ့ဖုန်းတွေက ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ပါ့မလား?
Samsung အပြင် နောက်ထပ် Huawei ကပါ ကွေးခေါက်စမတ်ဖုန်းလောကထဲ ဝင်လာပြီး ပိုကြမ်းလာတာက Apple ကပါ ကွေးခေါက်ဖုန်း ထုတ်တော့မယ်ဆိုတာပါ။
၂၀၁၈ မတ်လတုန်းက Apple က တင်ထားတဲ့ မူပိုင်ခွင့်ကို ဒီနေ့ပဲ USPTO မူပိုင်ခွင့်အဖွဲ့အစည်းက ဖော်ပြလိုက်ပါပြီ။ “Think Different” ဆိုတဲ့အတိုင်း သူများနဲ့မတူတဲ့ ကွေးခေါက်ဖုန်းမျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုခေါင်းစားလိုက်ရလဲ?
iPhone X ကနေစလို့ နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ LCD ကို မသုံးတော့ဘဲ (XR မှ လွဲ၍) အခုဒီဖုန်းမှာလည်း OLED Panel ကိုပဲ သုံးထားမှာပါ။ အကြိမ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ကွေးညွှတ်တာကို ခံနိုင်ဖို့အတွက် Apple ဖန်တီးထားတာက Polymer အလွှာတစ်ထပ်အုပ်လိုက်ခြင်းပါ။ သူက OLED panel ပေါ်မှာ ဖြန်းလိုက်တာ သုတ်လိုက်တာ နှစ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင် ဘယ်လောက်ပဲလိမ်လိမ်ကွေးကွေး အလွယ်တကူ ပျက်စီးမသွားတဲ့ အကာအကွယ်အလွှာလေးတစ်ထပ်ပါ။
မြင်ဖူးခဲ့သမျှ ကွေးခေါက်ဖုန်းတွေမှာ တစ်ဖက်တည်းကိုပဲ ခေါက်လို့ရပေမယ့် Apple ရဲ့ မူပိုင်ခွင့်မှာတော့ အတွင်းရော အပြင်ဘက်ကိုပါ ကွေးခေါက်နိုင်တာက ပိုဆန်းသစ်စေတယ်လို့ ပြောရမှာပါပဲ။ Samsung အနေနဲ့ ဘယ်ဘက်ခေါက်ခေါက် မကျိုးမပျက်စီးနိုင်တဲ့ Screen မျိုး မထုတ်နိုင်သေးရင်တော့ Apple က တစ်ပန်းသာသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက လေအဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ Flexpai လေးကလွဲရင် တိတိပပထုတ်ပြထားတဲ့ မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ နည်းပညာတွေက ပစ္စည်းအနေနဲ့ မထွက်လာသေးတော့ ပြောရတော့ ခက်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်တီထွင်ထားတဲ့ နည်းပညာဆိုပေမယ့် တကယ်ရောအသုံးတည့်ပြီး ရောင်းအားကောင်းရဲ့လားဆိုတာကတော့ ထွက်လာမှ တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့..
ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ စမတျဖုနျးတှေ ထုတျမယျလို့ ဟိုးအရငျကတညျးကနေ စီစဉျကွှေးကွျောနခေဲ့တဲ့သူကတော့ Samsung ပါ။ အခုလညျး သိပျမကွာတော့တဲံ အခြိနျတဈခုအတှငျးမှာ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Galaxy ဖုနျးတဈလုံးကို လာမယျ့ ၂၀၁၉ ပထမဆုံး ၃လအတှငျးမှာ မိတျဆကျလာနိုငျပါတယျ။
ဒီလိုကှေးခေါကျဖုနျးတှေ ထှကျလာမယျ့အကွောငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောခဲ့တဲ့အပွငျ ပွီးခဲ့တဲ့ Samsung Developer Conference မှာ ဖုနျး Prototype ကို ထုတျတောငျပွခဲ့ပါသေးတယျ။
တကယျတော့ ကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ Display နညျးပညာက တျောတျောလေးစိတျဝငျစားဖုိ့လညျးကောငျးသလို အပွိုငျအဆိုငျ ကွိုးစားလာကွတဲ့ ၂၀၁၉ ရဲ့နညျးပညာဆိုလညျး မှားလောကျမယျမထငျပါဘူး။ စိတျဝငျစားမိတာက ကှေးခေါကျလိုကျပွီး ပွနျဖွနျ့လိုကျရငျ ဘယျလိုပုံစံမြိုး ပွောငျးသှားမလဲ? တကယျရော လိုအပျတဲ့ Feature တဈခု ဟုတျရဲ့လား? အသုံးမလိုဘဲ ဆနျးသဈရုံဖနျတီးထားတာလား? အနာဂတျမှာရော ဒီကှေးခေါကျနိုငျတဲ့ဖုနျးတှကေ ဆကျလကျရပျတညျနိုငျပါ့မလား?
Samsung အပွငျ နောကျထပျ Huawei ကပါ ကှေးခေါကျစမတျဖုနျးလောကထဲ ဝငျလာပွီး ပိုကွမျးလာတာက Apple ကပါ ကှေးခေါကျဖုနျး ထုတျတော့မယျဆိုတာပါ။
၂၀၁၈ မတျလတုနျးက Apple က တငျထားတဲ့ မူပိုငျခှငျ့ကို ဒီနပေဲ့ USPTO မူပိုငျခှငျ့အဖှဲ့အစညျးက ဖျောပွလိုကျပါပွီ။ “Think Different” ဆိုတဲ့အတိုငျး သူမြားနဲ့မတူတဲ့ ကှေးခေါကျဖုနျးမြိုးဖွဈအောငျ ဘယျလိုခေါငျးစားလိုကျရလဲ?
iPhone X ကနစေလို့ နောကျပိုငျးဖုနျးတှမှော LCD ကို မသုံးတော့ဘဲ (XR မှ လှဲ၍) အခုဒီဖုနျးမှာလညျး OLED Panel ကိုပဲ သုံးထားမှာပါ။ အကွိမျပေါငျး မွောကျမြားစှာ ကှေးညှတျတာကို ခံနိုငျဖို့အတှကျ Apple ဖနျတီးထားတာက Polymer အလှာတဈထပျအုပျလိုကျခွငျးပါ။ သူက OLED Panel ပျေါမှာ ဖွနျးလိုကျတာ သုတျလိုကျတာ နှဈလိုကျတာမြိုးဆိုရငျ ဘယျလောကျပဲလိမျလိမျကှေးကှေး အလှယျတကူ ပကျြစီးမသှားတဲ့ အကာအကှယျအလှာလေးတဈထပျပါ။
မွငျဖူးခဲ့သမြှ ကှေးခေါကျဖုနျးတှမှော တဈဖကျတညျးကိုပဲ ခေါကျလို့ရပမေယျ့ Apple ရဲ့ မူပိုငျခှငျ့မှာတော့ အတှငျးရော အပွငျဘကျကိုပါ ကှေးခေါကျနိုငျတာက ပိုဆနျးသဈစတေယျလို့ ပွောရမှာပါပဲ။ Samsung အနနေဲ့ ဘယျဘကျခေါကျခေါကျ မကြိုးမပကျြစီးနိုငျတဲ့ Screen မြိုး မထုတျနိုငျသေးရငျတော့ Apple က တဈပနျးသာသှားနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒါတှအေားလုံးက လအေဆငျ့မှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။ Flexpai လေးကလှဲရငျ တိတိပပထုတျပွထားတဲ့ မူပိုငျခှငျ့တငျထားတဲ့ နညျးပညာတှကေ ပစ်စညျးအနနေဲ့ မထှကျလာသေးတော့ ပွောရတော့ ခကျပါတယျ။ ဆနျးသဈတီထှငျထားတဲ့ နညျးပညာဆိုပမေယျ့ တကယျရောအသုံးတညျ့ပွီး ရောငျးအားကောငျးရဲ့လားဆိုတာကတော့ ထှကျလာမှ တဈခကျြစောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့..
MyTech Myanmar2018-12-28T16:29:07+06:30December 28th, 2018|Apple, Mobile Phones, News|